Zanu (PF) inoda minda yose yengoda - The Zimbabwean
Zanu (PF) inoda minda yose yengoda
Zanu (PF) ine hurongwa hwekutora minda yose yengoda munyika, mukuru- mukuru muhurumende akataura. Mukuru mukuru uyu, ari mubazi repamusoro mubato reZanu (PF) rePolitburo, uyo asingakwanisi kudomwa nezita nechikonzero chekuchengetedza hupenyu hwake akaudza bepanhau reZimbabwean svondo rapfuura kuti pamusangano wakaitwa nevatungamiriri vari mubazi iri, vatungamiriri ava vakawirirana kutora minda yese yengoda iri munyika.
“Handina humbowo hwekuti vachazviita sei, asi hurongwa uhwu ndihwo hwakabvumiranwa mubato,” akadaro mukuru mukuru uyu.
Mutemo unoona nezvekucherwa kwengoda weDiamond Act, uyo uchiri pachinhano chekuongororwa nekugadziriswa nehurumende, unoti dai makambani ose akazvimiririra ari kuchera ngoda apihwa mvumo yekuona mafambisirwo emabasa pamigodhi iyi kwete kuva varidzi vemigodhi.
“Bazi rePolitburo rinoti pane makambani ane chekuita nekutemerwa kwakaitwa Zimbabwe zvirango zvehupfumi, ariiwo zvekare akabata mukucherwa kwengoda anofanira kutorerwa migodhi yose iyi,” akawedzera mukuru mukuru uyu.
Mukuru mukuru uyu akafumura zvekare kuti Zanu (PF) ine hurongwa hwekutora migodhi yeMurowa neRiver Ranch, yose yeDe Beers achisimbisa kuti kambani huru iyi mune zvemigodhi kuSouth Africa inotarisirwa kuruza.
Bato redu rakawirirana kuenderera mberi nekuchera zvicherwa zvenyika ino zvekare tiri kuti chirongwa chekupa upfumi kuvatema hachifaniri kuperera pakucherwa kwengoda, munzvimbo dzimwechete dzizere ngoda seChiadzwa,” Akati Zanu (PF) yakawirirana kuti gore rino ndiri rinofanira kuratidza shanduko mune chirongwa chekuvandudza hupfumi hwevatema uye mune zvekupa vatema simba mune zvehupfumi.
Minda yemangoda yekuChiadzwa yave pasi pehurumende uye mauto enyika akazara kuminda iyi. Makambani ose ari kuchera ngoda kunzvimbo iyi akapihwa mvumo neZanu (PF).
Makambani aya anosanganisira Mbada Diamonds, inonzi vakuru vakuru mubato reZanu (PF) vane chekuita mumashandiro ayo zvekare paine fungidziro yakanyanya yekuti mauto enyika ndiwo anoishandira pamwe chete neANJIN Investments yemaChinese.
Zvichakadai, kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuChiadzwa, kune humbowo kubva kuHuman Rights Watch nemamwe mapato ekunze akazvimiririra kuri kuenderera mberi pasina shanduko nekuda kwekuchengetedzwa kwakanyanya kunoitwa nzvimbo iyi nemauto.